ई-चुरोट सेवन गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधान ! यस्तो देखायो अध्ययनले - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
ई-चुरोट सेवन गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधान ! यस्तो देखायो अध्ययनले
प्रकाशित मिति: १७ असार २०७६, मंगलवार
वासिङ्टन । परम्परागत धूमपान सेवनले स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै विकल्पको रुपमा ई-चुरोट (विद्युतीय चुरोट) को प्रयोग हुँदै आएको थियो । तर वैज्ञानिक अनुसन्धानले ई-चुरोट सेवनले पनि स्वास्थ्यमा जोखिम निम्त्याउने देखाएको छ । ई-चुरोटले खासगरी मस्तिष्कको स्नायू प्रणाली र तन्तुमा ठूलो क्षति पुग्ने देखाएको छ ।
आई-साइन्स जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा बयस्क मुसामा गरिएको परीक्षणमा यस्तो नतिजा देखिएको उल्लेख छ । मस्तिष्कका तन्तुमा विद्युतीय तरल पदार्थ, एरोसोल वा निकोटिन मिसिए त्यसले मस्तिष्कको समग्र तन्तु र कोषिकामा नकारात्मक असर गर्दछ ।
सुरुवाती दिनहरुमा सुरक्षित ठानिएको ई-चुरोटहरु जस्तै भ्यूज र जूल पनि निकै हानिकारक हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यी चुरोटहरु नियमित सेवन गरेमा मानिस कुलतमा फस्ने र त्यसबाट मस्तिष्कका कोषिकाहरु मर्ने वा रोगी हुने अध्ययनमा भनिएको छ ।
अध्ययनकी लेखिका अटेना जाहेदीले निकोटिन भएका कुनै पनि वस्तुको सेवन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक देखिएको पनि बताईन् । उनले ई-चुरोटको धुँवा मस्तिष्कसम्म पुग्ने गरेकाले पनि यो निकै खतरनाक देखिएको बताईन् ।
मस्तिष्क विकासका क्रममा गम्भीर मोडमा रहने भएकाले युवा र गर्भवतीले यसमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
उनले युवा, किशोरावस्था वा गर्भवती हुँदा मस्तिष्कमा ई-चुरोटले बहुआयामिक असर पार्ने गरेको अध्ययनबाट देखिएको बताईन् । यस्तो उमेरमा ई-चुरोट सेवनले स्मरणशक्ति, सिकाई र बोधमा ठूलो क्षति पुग्ने उनको भनाइ छ ।
एजेन्सी । अमेरिकी राज्य साउथ क्यारोलिनामा शनिबार राति गोली चल्दा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु भएको अमेरिकी […]
चिकित्सकको घरबाट २ हजारभन्दा बढी मानव भ्रुणका अवशेष फेला
जोलियाट । अमेरिकाको इन्डियाना राज्यका पूर्व चिकित्सकको इलिनोइसस्थित घरबाट दुई हजारभन्दा बढी मानव भ्रुणका […]
काठमाडौं । अल्पसंख्यक हिन्दु, सिख समुदायप्रति पाकिस्तानमा एकपछि हिंसाको घटना सार्वजनिक भएका छन्। स्थानिय […]